लकडाउनमा श्रीमानले जतिबेला पनि यौनका लागि दबाब दिएको भन्दै महिलाले प्रहरी गुहारिन्
ramkrishna July 10, 2020	लकडाउनमा श्रीमानले जतिबेला पनि यौनका लागि दबाब दिएको भन्दै महिलाले प्रहरी गुहारिन्
लकडाउनमा काम बन्द भएपछि घरमै रहेका श्रमिानले आफूलाई लगातार यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिइरहेको भन्दै एक महिलाले प्रहरी गुहारेकी छिन् । भारतको बैंगलोरकी ती महिलाका अनुसार मार्च २४ मा लकडाउन सुरु भएपछि नै उनका श्रीमानले नुहाउन छोडे । उनले नुहाउन मान्दैनन् तर जतिबेला पनि यौनका लागि मात्र दबाब दिइरहन्छन् । महिलाले बैंगलोरको महिला हेल्पलाइन ‘परिहार’मा फोन गरेर उजुरी दिएको टाइम्स अफ इण्डियाले लेखेको छ ।
बाब दिइरहन्छन् । उनको ननुहाउने बानीलाई देखेर ९ वर्षकी छोरीले समेत नुहाउन छाडेकी छिन् । अहिले पिताको दैनिकी पच्छ्याउँदै छोरीले पनि नुहाउन अस्वीकार गर्न थालेकी छिन् । सिनियर काउन्सिलर बीएस सरस्वतीले टाइम्स अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै ती श्रीमानलाई सरसफाइको महत्वबारे बुझाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरिन् ।
Previous Previous post: के हो सेक्स क्यालेण्डर ? कसरी सेक्स गर्दा छोरा वा छोरी हुने साइत
Next Next post: के सेक्स शारीरिक कसरत हो ? सेक्स गर्दा के हुन्छ शरीर र दिमागमा